လက်သန့်ဆေးရည်သုံးတာထက် ဆပ်ပြာနဲ့လက်ဆေးတာက ဗိုင်းရပ်စ်ကိုပိုကာကွယ်နိုင် – Sharing
Bain Taw | September 6, 2020 | ျမန္မာ့ေဆး | No Comments
လက်သန့်ဆေးရည် သုံးတာထက် ဆပ်ပြာ နဲ့ လက်ဆေးတာက ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပိုကာကွယ်နိုင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ကြောက်စရာကောင်းပါတယ် ကြောက်သင့်ပါတယ်ကူးစက်မြန်တယ်သေစေနိုင်တယ်ကူးစက်ခံ ရပြီး သိပ်မကြာခင်အခန့်မသင့်လျှင် သေဆုံးနိုင်တယ်။
တခြား ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးမှုတွေ အများကြီးပါလူဆိုတာ သေမျိုးပါပဲ .. နေ့တိုင်းသေနေကြတာပါ2009 ခုနှစ် အမေရိကားက H1N1 တုပ်ကွေးက လူသန်းပေါင်းများစွာ ကူးစက်ခံရပြီး လူသိန်းချီသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါအပြင်တစ်နှစ်လျှင် TB ရောဂါကြောင့် ၁.၅ သန်း၊ HIV ကြောင့် လူ ၇.၇ သိန်း၊ ငှက်ဖျားကြောင့် လူ လေးသိန်းကျော် သေဆုံးနေပါတယ်မကူးစက်သော ရောဂါများ ကြောင့် တနှစ်လျှင် လူ သန်းလေးဆယ်ကျော် သေဆုံးနေပါတယ်။
အထူး အားဖြင့် နှလုံးရောဂါကင်ဆာရောဂါ ဆီးချိုရောဂါယာဉ်တိုက်မှုထိခိုက်ခံရခြင်းအဝလွန်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တနှစ်မှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ က ၁၇ သန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်…တကယ်တမ်း ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် သေဆုံးသူ အ များ စုကလဲ နဂို ရောဂါအခံ ရှိနေကြတာများပါတယ် အမှည့်ကြွေတာပါ။
ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်ပေါ့အကြောက်လွန်ပြီး နှာခေါင်းစည်းတွေ တပ်လိုက်ဖြုတ်လိုက် ပြန် တပ် လိုက် ယားလို့မျက်နှာကို ဟိုပွတ်ဒီပွတ် နဲ့မှ ရောဂါပိုး ကူးဖို့လွယ်မှာပါမလိုအပ်ပဲ ခရီးမထွက်ပါနဲ့ မလိုအပ်ပဲ လူထူထပ်ရာ မသွားပါနဲ့။ လူစုလူဝေးနှင့် ဝတ်ပြု ခြင်းများ.. ကိုလျှော့ပါ
(ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ရပါဥပမာကိုးရီးယား ဝတ်ပြုကျာ င်း)လက်ဆေးခြင်း.(လက်ကို hand senitzier နဲ့ဆေးတာထက် ဆပ်ပြာနဲ့စက္ကန့် ၂၀သေချာ ဆေးကြောတာကပိုကောင်းပါတယ်)စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ချခြင်းကျန်းမာအောင် နေထို င်စားသောက်ခြင်းတို့ကို အဓိကထားပြုမူနေထိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပြင် အခြားသော ရောဂါတွေကိုလဲ ကြောက်စေချင်ပါတယ်။Credit (ဒေါက်တာယဉ်နွယ်)
လကျသန့ျဆေးရညျ သုံးတာထကျ ဆပျပွာ နဲ့ လကျဆေးတာက ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈကို ပိုကာကှယျနိုငျ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ ကွောကျသင့ျပါတယျကူးစကျမွနျတယျသစေနေိုငျတယျကူးစကျခံ ရပွီး သိပျမကွာခငျအခန့ျမသင့ျလြှငျ သဆေုံးနိုငျတယျ။
တခွား ရောဂါတှကွေောင့ျ သဆေုံးမှုတှေ အမြားကွီးပါလူဆိုတာ သမြေိုးပါပဲ .. နေ့တိုငျးသနေကွေတာပါ2009 ခုနှဈ အမရေိကားက H1N1 တုပျကှေးက လူသနျးပေါငျးမြားစှာ ကူးစကျခံရပွီး လူသိနျးခြီသဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ဒါအပွငျတဈနှဈလြှငျ TB ရောဂါကွောင့ျ ၁.၅ သနျး၊ HIV ကွောင့ျ လူ ၇.၇ သိနျး၊ ငှကျဖြားကွောင့ျ လူ လေးသိနျးကြောျ သဆေုံးနပေါတယျမကူးစကျသော ရောဂါမြား ကွောင့ျ တနှဈလြှငျ လူ သနျးလေးဆယျကြောျ သဆေုံးနပေါတယျ။
အထူး အားဖွင့ျ နှလုံးရောဂါကငျဆာရောဂါ ဆီးခြိုရောဂါယာဉျတိုကျမှုထိခိုကျခံရခွငျးအဝလှနျခွငျး တို့ကွောင့ျဖွဈပါတယျတနှဈမှာ နှလုံးရောဂါကွောင့ျ သဆေုံးသူ က ၁၇ သနျးခန့ျဖွဈပါတယျ…တကယျတမျး ဆနျးစဈကွည့ျလိုကျရငျ… ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွောင့ျ သဆေုံးသူ အ မြား စုကလဲ နဂို ရောဂါအခံ ရှိနကွေတာမြားပါတယျ အမှည့ျကွှတောပါ။
ထနျးသီးကွှခေိုကျ ကြီးနငျးခိုကျပေါ့အကွောကျလှနျပွီး နှာခေါငျးစညျးတှေ တပျလိုကျဖွုတျလိုကျ ပွနျ တပျ လိုကျ ယားလို့မကြျနှာကို ဟိုပှတျဒီပှတျ နဲ့မှ ရောဂါပိုး ကူးဖို့လှယျမှာပါမလိုအပျပဲ ခရီးမထှကျပါနဲ့ မလိုအပျပဲ လူထူထပျရာ မသှားပါနဲ့။ လူစုလူဝေးနှင့ျ ဝတျပွု ခွငျးမြား.. ကိုလြှော့ပါ
(ဘာသာရေးကိုဆန့ျကငြျတာမဟုတျရပါဥပမာကိုးရီးယား ဝတျပွုကြာ ငျး)လကျဆေးခွငျး.(လကျကို hand senitzier နဲ့ဆေးတာထကျ ဆပျပွာနဲ့စက်ကန့ျ ၂၀သခြော ဆေးကွောတာကပိုကောငျးပါတယျ)စိတျဖိစီးမှုကိုလြော့ခခြွငျးကနြျးမာအောငျ နထေို ငျစားသောကျခွငျးတို့ကို အဓိကထားပွုမူနထေိုငျဖို့ကပိုအရေးကွီးတယျလို့ယူဆပါတယျ။ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အပွငျ အခွားသော ရောဂါတှကေိုလဲ ကွောကျစခေငြျပါတယျ။Credit (ဒေါကျတာယဉျနှယျ)
မ်က္ႏွာမွာရွိတဲ့ အမာ႐ြတ္ေလးေတြေပ်ာက္ကင္းေအာင္ နည္းလမ္း(၉)မ်ုူိး
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်သတ်သတ်မဟုတ် ဆေးဖက်ဝင်လွန်းတဲ့ စပါးလင်ပင်